Guddi ka socda dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo kulmay. – Hornafrik Media Network
Guddi ka socda dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo kulmay.
By Liibaan Nuur	 On Aug 31, 2018
HornAfrik-Heshiiskaan oo ay kala saxiixdeen Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay ku sheegeen in lagu xoojinayo Iskaashiga, Xiriirka, Biyaha iyo qodobo kale.
Qarax iyo dagaal toos ah oo caawa ka dhacay Sh/Hoose.
Deg-Deg-Qarax gaari oo Muqdisho ka dhacay.